ဆီလီကွန် Masterbatch LYSI စီးရီး
WPC အတွက် Additive Masterbatch
Si-TPV 3100 စီးရီး
Si-TPV 3300 စီးရီး
Si-TPV 2150 စီးရီး
Si-TPV 2250 စီးရီး
Si-TPV 3420 စီးရီး
Si-TPV 3520 စီးရီး
Si-TPV 3521 စီးရီး
Si-TPV AW စီးရီး
မော်တော်ယာဥ်အတွင်းပိုင်းအတွက် ခြစ်ရာကင်းသော Masterbatch
ဖိနပ်တစ်ဘက်တည်းအတွက် ပွန်းပဲ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး masterbatch
တယ်လီကွန်းပိုက်အတွက် ဆီလီကွန် Masterbatch
ဝတ်ဆင်နိုင်သော စက်အတွက် Si-TPV
အဖြူရောင်နှင့် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများအတွက် ဆီလီကွန်ဖယောင်း
ပလပ်စတစ် ထိုးဆေးမှို ဖြန့်ချိရေး အေးဂျင့် SILIMER 5140 ပေါ်လီမာ ပေါင်းထည့်မှု
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနှင့် မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများတွင် အဘယ်ပလပ်စတစ်ထည့်ဆေးများသည် အသုံးဝင်သနည်း။မျက်နှာပြင်အချောထည်၊ လည်ပတ်ချိန်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ ပန်းချီ သို့မဟုတ် ကော်မန့်မီ မှိုတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို လျှော့ချခြင်းသည် ပလတ်စတစ်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်သည်။ပလပ်စတစ်ထိုးဆေးမှိုထုတ်လွှတ်ခြင်း Agen...
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကစားစရာများတွင် ပျော့ပျောင်းသော အထိအတွေ့အတွက် Si-TPV ဖြေရှင်းချက်
ပိုမိုကောင်းမွန်သော တာရှည်ခံမှုနှင့် အလှတရားများကို ပေးဆောင်နေချိန်တွင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကစားစရာများ စျေးကွက်တွင် အန္တရာယ်ကင်းပြီး ရေရှည်တည်တံ့သောပစ္စည်းများကို စားသုံးသူများက မျှော်လင့်နေကြသည်... သို့သော်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အရုပ်ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးကာ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ခွန်အားဖြစ်စေမည့် ဆန်းသစ်သောပစ္စည်းများ လိုအပ်ပါသည်။
Abrasion-resistant EVA ပစ္စည်းအတွက် နည်းလမ်း
admin မှ 22-06-15 ရက်နေ့တွင်
လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ အားကစားဖိနပ်များကို ကြည့်ကောင်းခြင်းမှ လက်တွေ့ဘဝသို့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဦးစားပေး ချဉ်းကပ်လာကြသည်။EVA သည် ethylene/vinyl acetate copolymer (ethene-vinyl acetate copolymer ဟုလည်းရည်ညွှန်းသည်) သည် ကောင်းမွန်သော plasticity၊ elasticity နှင့် machinability ရှိပြီး အမြှုပ်ထွက်ခြင်းဖြင့် ကုသသည်...
22-06-07 တွင် admin မှ
ချောဆီပလတ်စတစ်များသည် ၎င်းတို့၏သက်တမ်းကိုတိုးစေပြီး ပါဝါစားသုံးမှုနှင့် ပွတ်တိုက်မှုကိုလျှော့ချရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ပလတ်စတစ်ကို ချောဆီရန်အတွက် နှစ်များတစ်လျှောက်တွင် ပစ္စည်းအများအပြားကို ဆီလီကွန်၊ PTFE ပေါ်အခြေခံ၍ ချောဆီများ၊ မော်လီကျူးအလေးချိန်နည်းသော ဖယောင်းများ၊ ဓာတ်သတ္တုဆီများနှင့် ဓာတု ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်တို့ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့ကြသော်လည်း တစ်ခုစီတွင် မလိုလားအပ်သော အရာများရှိသည်။ ို...
2022 AR နှင့် VR Industry Chain Summit Forum
ဤ AR/VR Industry Chain Summit Forum တွင် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် လုပ်ငန်းကွင်းဆက် Bigwigs တို့မှ စင်မြင့်ပေါ်တွင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော မိန့်ခွန်းကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။စျေးကွက်အခြေအနေနှင့် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းမှနေ၍ VR/AR လုပ်ငန်း၏နာကျင်မှုအချက်များ၊ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ လိုအပ်ချက်များ၊ ...
Die drool လျော့နည်းခြင်းနှင့် ဝါယာကြိုးများနှင့် ကေဘယ်လ်ဒြပ်ပေါင်းများတွင် မျက်နှာပြင်တိုးတက်မှု
admin မှ 22-05-26 ရက်နေ့တွင်
ကေဘယ်လ်လုပ်ငန်းတွင်၊ ကေဘယ်ကြိုးကို ကာရံထားစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် နှုတ်ခမ်းပုံသဏ္ဍာန်ကဲ့သို့သော သေးငယ်သောချို့ယွင်းချက်သည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်၏ အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေသည့် နာတာရှည်ပြဿနာအဖြစ်သို့ မလိုအပ်ဘဲ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အခြားအရင်းအမြစ်များ ဆုံးရှုံးစေသည်။SILIKE Silicone masterbatch ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်...
PA ထုတ်လုပ်မှုတွင် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မဟာဗျူဟာ
ပိုမိုကောင်းမွန်သော tribological ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် PA ဒြပ်ပေါင်းများ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို မည်သို့ရရှိမည်နည်း။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတရှိသော additives များနှင့်အတူ။Polyamide (PA, Nylon) ကို ကားတာယာကဲ့သို့ ရော်ဘာပစ္စည်းများတွင် အားဖြည့်ခြင်း၊ ကြိုး သို့မဟုတ် ချည်မျှင်အဖြစ် အသုံးပြုရန်နှင့် ma...
နည်းပညာအသစ် 丨 သည် Fitness Gear Pro Grips အတွက် ပျော့ပျောင်းသော အထိအတွေ့ သက်သောင့်သက်သာဖြင့် အကြမ်းခံနိုင်မှုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
နည်းပညာအသစ် 丨 သည် Fitness Gear Pro Grips အတွက် ပျော့ပျောင်းသော အထိအတွေ့ သက်သောင့်သက်သာဖြင့် အကြမ်းခံနိုင်မှုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။SILIKE သည် သင့်အား Si-TPV ဆေးထိုးဆီလီကွန် အားကစားပစ္စည်းကိရိယာလက်ကိုင်များကို ယူဆောင်လာပေးသည်။Si-TPV ကို စမတ်ခုန်ကြိုး လက်ကိုင်များ၊ စက်ဘီး လက်ကိုင်များ၊ ဂေါက်ရိုက်တံများ၊
အရည်အသွေးမြင့် ချောဆီထည့်သည့် ဆီလီကွန် masterbatch ၏ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
SILIKE ဆီလီကွန် masterbatches LYSI-401, LYSI-404- ဆီလီကွန်အူတိုင်ပြွန်/ဖိုက်ဘာပြွန်/PLB HDPE ပြွန်၊ လိုင်းပေါင်းစုံမိုက်ခရိုပြွန်/ပြွန်နှင့် ကြီးမားသောအချင်းပြွန်များအတွက် သင့်လျော်သည်။Application ၏အားသာချက်များ- (1) ပိုမိုကောင်းမွန်သော fluidity၊ လျော့ချထားသော die drool၊ extrusion torque လျှော့ချခြင်းအပါအဝင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊
2nd Smart Wear Innovation Materials and Applications Summit forum ကို 2021 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 10 ရက်နေ့တွင် Shenzhen တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ မန်နေဂျာ။R&D အဖွဲ့မှ Wang သည် လက်ပတ်ကြိုးများပေါ်ရှိ Si-TPV အက်ပလီကေးရှင်းတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး စမတ်လက်ပတ်ကြိုးများနှင့် နာရီကြိုးများပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စည်းအသစ်ဖြေရှင်းနည်းများကို မျှဝေခဲ့သည်။နှိုင်းယှဥ်...
Silike သည် "Little Giant" ကုမ္ပဏီများစာရင်း၏တတိယအသုတ်တွင်ပါဝင်သည်။
မကြာသေးမီက Silike သည် Specialization၊ Refinement၊ Differentiation၊ Innovation "Little Giant" ကုမ္ပဏီများစာရင်း၏ တတိယအသုတ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။“အသေးစား” လုပ်ငန်းများကို “ကျွမ်းကျင်သူ” အမျိုးအစားသုံးမျိုးဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။ပထမအချက်က စက်မှုလုပ်ငန်း ” ကျွမ်းကျင်သူR...
လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ လေ့ကျင့်ခန်းစွမ်းရည်အပေါ် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ရော်ဘာဖြင့် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဖိနပ်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။အားကစားမျိုးစုံ၏နေ့စဉ်ဘဝတွင် စားသုံးသူများ ပိုမိုတက်ကြွလာသည်နှင့်အမျှ သက်တောင့်သက်သာရှိသော၊ ချော်လဲခြင်းနှင့် ပွန်းပဲ့ခြင်းခံနိုင်သောဖိနပ်များအတွက် လိုအပ်ချက်များသည် ပိုမိုမြင့်မားလာပါသည်။ရော်ဘာ ပျား...
မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းအတွက် Scratch-Resistant နှင့် Low VOCs Polyolefins ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း။
မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းအတွက် Scratch-Resistant နှင့် Low VOCs Polyolefins ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း။>> မော်တော်ကားများတွင် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ပိုလီမာအများအပြားမှာ PP၊ talc-filled PP၊ talc-filled TPO၊ ABS၊ PC(polycarbonate)/ABS၊ TPU (thermoplastic urethanes) တို့ဖြစ်သည်။စားသုံးသူတွေနဲ့...
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အသားအရေအတွက် အဆင်ပြေစေမည့် SI-TPV သည် လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေသည်။
Soft Eco-friendly Electric Toothbrush Grip Handle ၏ ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်း >> လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံ၊ လက်ကိုင်လက်ကိုင်ကို ယေဘူယျအားဖြင့် ABS၊ PC/ABS ကဲ့သို့သော အင်ဂျင်နီယာ ပလတ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ခလုတ်နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို လက်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်စေရန်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း ခံစားချက်၊ ခက်ခက်ခဲခဲ...
မော်တော်ယာဥ်အတွင်းပိုင်း အက်ပလီကေးရှင်းများတွင် ဆူညံသံများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်း။မော်တော်ယာဥ်အတွင်းပိုင်းရှိ ဆူညံသံများကို လျှော့ချခြင်းသည် ပို၍အရေးကြီးလာသည်၊ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် Silike သည် ပြင်းထန်သောအမြဲတမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့် အထူးပိုလီစီလလာစ 2070 ကို တီထွင်ခဲ့သည်။
ဆန်းသစ်သော SILIMER 5320 ချောဆီ masterbatch သည် WPC များကို ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်သည်။
Wood Plastic Composite (WPC) သည် သစ်သားမှုန့်၊ လွှမှုန့်၊ သစ်သားပျော့ဖတ်၊ ဝါးနှင့် သာမိုပလတ်စတစ်တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ဤသည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတပစ္စည်း။အများအားဖြင့် ကြမ်းပြင်များ၊ လက်ရန်းများ၊ ခြံစည်းရိုးများ၊ ရှုခင်းသစ်များပြုလုပ်ခြင်း၊ ကာရံခြင်းနှင့် ဘေးချင်းကပ်ခြင်း၊ ပန်းခြံခုံတန်းလျားများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ... သို့သော် စုပ်ယူမှု ...
နူးညံ့သောအတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်များထုတ်လုပ်ရန် စီမံဆောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းများနှင့် ပစ္စည်းများအသစ်ရှိသည်။
မော်တော်ယာဥ်အတွင်းပိုင်းရှိ မျက်နှာပြင်အများအပြားသည် မြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှု၊ သာယာသောအသွင်အပြင်နှင့် ကောင်းမွန်သော haptic ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ သာမာန်ဥပမာများမှာ တူရိယာပြားများ၊ တံခါးအကာများ၊ အလယ်ကွန်ကွပ်နှင့် လက်အိတ်အဖုံးများဖြစ်သည်။မော်တော်ယာဥ်အတွင်းပိုင်းမှာ အရေးကြီးဆုံး မျက်နှာပြင်က တူရိယာပါ...
Super Tough Poly (Lactic Acid) ရောစပ်ရန် နည်းလမ်း
ရေနံမှရရှိသော ဓာတုပလတ်စတစ်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် အဖြူရောင်ညစ်ညမ်းမှုဟု လူသိများသော ပြဿနာများကြောင့် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ ကာဗွန်အရင်းအမြစ်များကို အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် ရှာဖွေခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပြီး အရေးတကြီးဖြစ်လာသည်။Polylactic acid (PLA) ကို အစားထိုးရန် အလားအလာရှိသော အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ယူဆခဲ့ကြသည်...
SILIKE သည် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများအတွက် PP ပစ္စည်းများ၏ စွန်းထင်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေမည့် ဆီလီကွန်ဖယောင်း မျိုးဆက်သစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
iiMedia.com မှ အချက်အလက်များအရ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် အဓိက အိမ်သုံးပစ္စည်းများ ရောင်းချမှုသည် အလုံးရေ ၃၈၇ သန်းရှိပြီး 2019 ခုနှစ်အထိ ယူနစ်သန်းပေါင်း 570 အထိ ရောက်ရှိခဲ့သည်။China Household Electrical Appliances Association မှ အချက်အလက်များအရ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ...
China Plastics လုပ်ငန်း၊ Silicone Masterbatch ဖြင့် ပြုပြင်ထားသော Tribological Properties များကို လေ့လာခြင်း။
admin မှ 21-06-30 ရက်နေ့တွင်
ဆီလီကွန် masterbatch/linear low density polyethylene (LLDPE) ပေါင်းစပ်ပါဝင်မှုများသော ဆီလီကွန် masterbatch 5%, 10%, 15%, 20%, 30% တို့ကို ပူပြင်းသောနှိပ်နယ်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် ဖန်တီးပြီး ၎င်းတို့၏ tribological စွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ရလဒ်များအရ ဆီလီကွန် masterbatch c...
စံပြဝတ်ဆင်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော ပိုလီမာဖြေရှင်းချက်
DuPont TPSiV® ထုတ်ကုန်များသည် ဆန်းသစ်တီထွင်သော ဝတ်ဆင်နိုင်သောအမြောက်အမြားတွင် ဝတ်ဆင်နိုင်သော အကြမ်းခံနိုင်မှုနှင့်အတူ ပျော့ပျောင်းသောအထိအတွေ့ဖြင့် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေကြောင်း သက်သေပြထားသည့် thermoplastic matrix တွင် vulcanized ဆီလီကွန် module များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။TPSiV ကို စမတ်/GPS နာရီများ၊ နားကြပ်များနှင့် တက်ကြွမှုတို့မှ ဆန်းသစ်သော ဝတ်ဆင်နိုင်သော ကျယ်ပြန့်သော ရောင်စဉ်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
SILIKE ထုတ်ကုန်သစ် Silicone Masterbatch SILIMER 5062
admin မှ 21-06-16 ရက်နေ့တွင်
SILIKE SILIMER 5062 သည် ဝင်ရိုးစွန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအုပ်စုများပါ ၀ င်သော alkyl-modified siloxane masterbatch ရှည်လျားသောကွင်းဆက်ဖြစ်သည်။၎င်းကို PE၊ PP နှင့် အခြားသော polyolefin ရုပ်ရှင်များတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုထားပြီး၊ ဖလင်၏ ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် ချောမွေ့မှုကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ကာ စီမံဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ချောဆီအား သိသိသာသာ လျှော့ချပေးနိုင်သည်...
Chinaplas2021 |အနာဂတ်တွေ့ဆုံမှုအတွက် ဆက်လက် ပြေးပါ။
admin မှ 21-04-16 ရက်နေ့တွင်
Chinaplas2021 |လေးရက်ကြာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရော်ဘာနှင့် ပလတ်စတစ် ပြပွဲကြီးသည် ယနေ့တွင် ပြီးပြည့်စုံသော နိဂုံးချုပ်သွားခြင်း နှင့် ဆုံတွေ့နိုင်စေရန်အတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။လေးရက်တာရဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် အများကြီး ရရှိခဲ့ပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။အာရုံသုံးပါးနဲ့ အနှစ်ချုပ်ရရင်...
နွေဦး စည်းဝေးပွဲ အစီအစဉ်|Yuhuang တောင်တွင် Silike အဖွဲ့တည်ဆောက်သည့်နေ့
ဧပြီလ နွေဦးလေညင်းက သာယာတယ်၊ မိုးတွေရွာပြီး မွှေးပျံ့လို့ ကောင်းကင်ပြာပြာနဲ့ သစ်ပင်တွေ စိမ်းစိမ်းစိုစို နေသာတဲ့ ခရီးကို သွားနိုင်ရင် ပျော်စရာကောင်းမှာပဲလို့ တွေးလိုက်ရုံနဲ့ နွေဦးကို မျက်နှာမူပြီး အပြင်ထွက်ဖို့ အချိန်ကောင်းပါပဲ၊ ငှက်တွေရဲ့ Twitter နဲ့ ပန်းရနံ့ Silik...
Silike China ဖယောင်းထုတ်ကုန် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေး မိန့်ခွန်းကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
21-03-19 တွင် admin မှ
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖယောင်းထုတ်ကုန် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို jiaxing၊ zhejiang ပြည်နယ်တွင် သုံးရက်ကြာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သူ များပြားသည်။အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှု၊ ဘုံတိုးတက်မှုကိုအခြေခံ၍ Chengdu Silike Technology co., R&D မန်နေဂျာ Mr.Chen၊
သင်နှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား လာမည့်မှတ်တိုင်တွင် စောင့်ပါမည်။
21-03-11 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Silike သည် ထုတ်ကုန်များကို သုတေသနပြုလုပ်ပြီး တီထွင်ထုတ်လုပ်ကာ သုံးစွဲသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် "သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၊ လူသားဆန်မှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် လက်တွေ့ကျမှု" စိတ်ဓာတ်ကို အမြဲလိုက်နာသည်။ကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြပွဲများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်၍ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များကို အဆက်မပြတ်လေ့လာပါ...
R&D အဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝ၏ အထွတ်အထိပ်တွင် ဤနေရာတွင် စုဝေးကြသည်။
20-08-11 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ဩဂုတ်လကုန်တွင်၊ Silike Technology ၏ R&D အဖွဲ့သည် အလုပ်များသောအလုပ်မှ ခွဲခွာကာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရှေ့သို့ ရွေ့လျားကာ Qionglai သို့ နှစ်ရက်နှင့် တစ်ညတာ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ချီတက်ပွဲတစ်ခုအတွက် ~ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသော ခံစားချက်အားလုံးကို ထုပ်ပိုးလိုက်ပါ။ဘာစိတ်ဝင်စားလဲသိချင်တယ်...
Zhengzhou ပလတ်စတစ် ကုန်စည်ပြပွဲသို့ သွားခြင်းဆိုင်ရာ Silike အထူးအစီရင်ခံစာ
20-07-10 ရက်နေ့တွင် admin မှ
2020 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 8 ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ 10 ရက်နေ့အထိ Silike Technology မှ Zhengzhou International Plastic Expo တွင် 10 ကြိမ်မြောက် China (Zhengzhou) Plastic Expo တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည့်အကြောင်း Silike အထူးအစီရင်ခံစာပါ...
No.336 Chuangxin Ave၊ Qingbaijiang စက်မှုဇုန်၊ 610300၊ Chengdu၊ တရုတ်။
ဖုန်း ၈၆-၀၂၈-၈၃၆၂၅၀၈၉ ၈၆-၁၅၁၀၈၂၈၀၇၉၉
© မူပိုင်ခွင့် 20102022 : All Rights Reserved. >